नाेबेल मेडिकल कलेज Archives - Page2of4- Purbeli News
बिराटनगर / पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक नोबेल शिक्षण अस्पतालले मेडिकल थोर्याकोस्कोपी सुरु गरेको छ । रोगका कारण फोक्सो बाहिरको झिल्लीमा जमेको पानी, पिप, हावा वा विकार युक्त पदार्थ निकाल्ने वा फोक्सो सम्बन्धि रोग पत्ता लगाउँने बिधि थोर्याकोस्कोपी हो । यो बिधि मार्फत छातीमा प्वाल पारेर थोर्याकोस्कोप छिराई रोग पत्ता लगाउँने र उपचार गर्ने गरिन्छ । नेपालमा ब...
माेरङ / कोशी अस्पतालमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञका डा. विमल अग्रवाललाई हृदयघात भएको छ । अग्रवाल ६ वर्षदेखि कोसी अस्पतालमा कार्यरत थिए । विराटनगरस्थित नोवेल शिक्षण अस्पतालमा मंगलबार उपचारका लागि भर्ना भएका डा. अग्रवालको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । उपाचारका क्रममा इसिजी गर्दा केही असहज देखिएपछि इलेक्ट्रो कार्डियोग्...
उपचार गर्न नसकेर मृत्युको मुखमा पुगेका बिरामीकाे उद्दार गर्दै डा.शर्मा
विराटनगर / गाला भित्र निस्किएको ट्यूमर बढ्दै गएर घाउमा किरा पर्दासमेत उपचार गर्न नसकी पीडाले तड्पिन बाध्य थिए मोरङको पथरीशनिश्चरेका चन्द्रबहादुर राई । पैसा नभएकै कारण उपचार गर्न नसक्दा थलिएर मृत्युको मुखमा पुगेका ४४ बर्षीय राईका लागि नोबेल अस्पताल सञ्चालक डा.सुनिल शर्मा ‘भगवान’ सरह बने । घाउमा स्याँउस्याँउती किरा परेर दुर्गन्धित भई छेउछाउमा मान्छे ...